५ असार २०७८, शनिबार ०९:५४ PM
पुसभित्र लक्षित समूहलाई खोप, कुन देशबाट कति माग ?
१५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:०४ मा प्रकाशित
२०७८ जेष्ठ १५ शनिबार, काठमाडौं । सरकारले आगामी १७ पुससम्म लक्षित समूह २ करोड १७ लाख नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना बनाएको छ ।
– साता दिनभित्र चीनबाट १० लाख मात्रा आइपुग्ने
– खोपका लागि ३६ अर्ब बजेट सुनिश्चित
कुन देशबाट कति माग ?
चीन : ५० लाख भेरोसेल
अमेरिका : ५० लाख अस्ट्रेजेनेका वा जोन्सोन एन्ड जोन्सन
भारत : १७ लाख कोभिसिल्ड
‘कोभ्याक्सअन्तर्गत नेपालले १९ लाख मात्रा खोप गत मार्चसम्म पाइसक्नुपर्ने थियो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हालसम्म कोभ्याक्समार्फत ३ लाख ४८ हजार मात्रा खोप प्राप्त भएको छ । कूटनीतिक प्रयत्न जारी छ ।’
विभिन्न मुलुकसँग खोप खरिद वा अनुदान विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले साता दिनभित्र ‘ब्रेक थु्र’ हुने प्रस्ट पारे । खोपका लागि ३६ अर्ब बजेट स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।
सरकारले चीनको भेरोसेल, रुसको स्पुतनिक भी, अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन र बेलायतको अस्ट्राजेनेका खोप प्राप्तिका लागि पहल गर्दै आएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले दोस्रो डोज खोप लगाउने समयावधि विषयमा छिट्टै निक्र्योल गरिने जानकारी दिए ।
‘दोस्रो मात्रा कहिले लगाउने ? भन्नेबारे छिट्टै निर्णय हुनेछ, खोप अभाव भएकै कारण १२ साताभित्र लगाउनुपर्ने कोभिडसिल्ड लगाउने समय घर्किएको हो,’ उनले भने, ‘हालसम्म अनुमानित ४ लाख ५० हजार नागरिकले पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएका छन् ।’
संक्रमणमुक्त संख्या बढ्दै
यसैबीच, शुक्रबार देशभर ९ हजार ८ सय ४१ संक्रमित निको भएका छन् । योसँगै निको हुनेको संख्या ४ लाख २८ हजार ६ सय ७० पुगेको छ ।
देशभर थप ६ हजार ९ सय ५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमित संख्या ५ लाख ४९ हजार १ सय ११ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ९६ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । हालसम्म ७ हजार ४७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
हाल, देशभर १ लाख १३ हजार ३ सय ९४ सक्रिय संक्रमित छन् । १ हजार ६ सय २७ आईसीयू र ४ सय ५० संक्रमित भेन्टिलेटरमा छन् । प्रदेश १ मा २ सय १० आईसीयू र ५३ भेन्टिलेटर, प्रदेश २ मा १ सय ७७ आईसीयू र ३६ जना भेन्टिलेटरमा छन् ।
बाग्मती प्रदेशमा ७ सय ७५ आईसीयू र २ सय ८९ भेन्टिलेटर, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ७६ आईसीयू र ३६ जना भेन्टिलेटर, लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ९० आईसीयू र १९ जना भेन्टिलेटर, कर्णालीमा ५१ आईसीयू र ५ जना भेन्टिलेटर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४८ आईसीयू र १२ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।